Raad Raac News Online – Xulka Somaaalia oo galabta looga badiyay Goolashii ugu badnaa ee abid la iska dhaliyo Tartanka Bariga iyo Bartamaha Africa
Xulka Somaaalia oo galabta looga badiyay Goolashii ugu badnaa ee abid la iska dhaliyo Tartanka Bariga iyo Bartamaha Africa
Faarax December 1, 2012 0
Xulka Qaranka Soomaaliya ayaa galabta Guul daro aad u xun kala kulantay Xulka Qaranka Dalka Tanzaaniya ay galabta kuwada ciyaareen Magaalada Kampala kulan katirsan Tartanka Bariga iyo Bartmaha Afrika .
Ciyaarta galabta waxa ay Soomaaliya u aheed ciyaar aad u xun aadna looga niyad jabo kadib markii Goolka Soomaaliya uu noqday mid furan oo laga celin waayay labo Wiil oo u dhashay Xulka Dalka Tanzaaniya oo Weerarkii ay bilaabeen Daqiiqadii 1-aad ciyaarta kusoo afjaray daqiiqadii ugu dambeysay.
Soomaaliya waxaa dhabarka loo saaray guul daradii ugu Xumeed ee Tartanka Bariga iyo Bartamaha Afrika iyadoona goolasha galabta laga dhaliyay ay noqonayaan kuwii ugu badnaa ee abid la iska dhaliyo Tartankan.
Soomaaliya waxaa laga dhaliyay ilaa 7-gool oo Nadiif ah waxaana 5 kamid ah Goolashaasi ka dhaliyay Wiilka car carka ahaa galabta Ngaso halka labada kalana uu ku fara yareestay inan kale oo u safnaa Xulka Tanzaaniya.
Isku geyn sadaxdii kulan ee Soomaaliya ay ciyaartay waxaa laga dhaliyay ilaa 13-gool iyana waxa ay dhalisay hal gool oo rigoore ahaa kulankii ay la ciyaareen Dalka Brundi.
Soomaaliya hada waxa ay boorsooyinkooda kasoo qaateen Dalka Ugandha iyaga oo wata in kabadan 13- Goolal ah oo laga dhaliyay iyo hal gool ay dhaliyeen iyagoona hal dhibic xitaa aysan kulanka Bariga iyo Bartamaha Afrika ka keenin.